January 12, 2021 2028
सवारी चालक अनु:मति पत्रको माप’दण्ड परिवर्तन हुने भएको छ। याता’यात व्यवस्था विभा:गले अहि:लेको कडा मापदण्ड परिमार्जन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ।
यो प्रस्ताव:अनुसार कुनै सानो गल्तीले ट्रायल फेल नहुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन:बहादुर हमालले सेतो’पाटीलाई जानकारी दिए।
‘अहिले ट्रायल दिनेमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै पा’स हुन्छन्। राम्रोसँग सवारी’साधन चलाउन जान्नेहरू पनि सामा’न्य गल्तीमा फेल हुँदा बिचौलियाकहाँ जाने स’मस्या देखि’यो। त्यही भएर अलि सहज बनाउन यो काम गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।
हमालका अनुसार नयाँ प्रस्तावमा ट्रायलका विभिन्न चरण अंकका आधारमा पास-फेल निधो गरि:नेछ। ट्रायल सुरूवातकै ‘एट (८)’ मा छिरेदेखि ट्रायल पूरा गरेर ननिस्किउञ्जेलसम्म विभिन्न प्यारा:मिटरमा अंक बाँडिनेछ।यो ट्राय:लको पूर्णाक १०० हुने र ६० आउनेहरू पास हुने उनले जानकारी दिए। प्यारामिटर र त्यस’का अंक कति राख्ने भन्नेबारे हाल छलफल चलिरहेको उनले बताए।
‘अहिले हेल्मेटको लक नल’गाए पनि ट्रायल फेल हुने नियम छ। अब भने त्यसमा पनि निश्चित अंक पाउ:नेछन्। त्यस्तै ८ कटा:एको निश्चित अंक हुनेछ। यस्तै–यस्तै विभि:न्न प्यारा’मिटर हुनेछन्,’ हमालले भने।
समग्रमा ट्रायल:का सानातिना कडा नियम अलि खु:कुलो बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै लिखि:त परीक्षा’को ढाँचा पनि केही परिवर्तन हुने उनले बताए।
‘५ सय वा एक हजार प्रश्नका सेट हामी सुरूमै सार्वजनिक गर्नेछौं। प्रश्न त्यहीँ भित्रबाट मात्रै सो:धिनेछन्,’ हमालले भने।योसँगै विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अनला’इन आवेदन फारम भर्न लागू गरिएको को:टा सिस्टम पनि हटाउ:न लागेको छ।
यसको लागि सर्भर क्ष’मता बढाउने, लोड म्यानेजमेन्ट लगाय’तको काम भइर’हेको हमालले जा:नकारी दिए। ‘सेवाग्राहीबाट फारम भर्न कठिन भयो भन्ने गुनासो धेरै आयो त्यस’कारण अन’लिमिटेड बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने।
तयारी पूरा भए यही बिहीबारबाट अन’लिमिटेड बनाउने र त्यो दिन सम्भव नभए आइतबा’रदेखि गर्ने उनले जानकारी दिए। यसरी फारम भर्दा एकैप’टक धेरैले भरे पनि सिस्ट’मले ‘वेटिङ’मा राखेर बा’योमेट्रिकको मिति तोक्ने उनले बताए।
यातायात व्य’वस्था विभागले गत पुस १० गते सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राल’यले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्ब’न्धी मा’पदण्ड पालन गर्ने व्यवस्था गरी १४ गतेदे’खि लाइसेन्स आवदेन खुला गरेको थियो। आवेदन खुला भए पनि कोटा सिस्ट’म फारम भर्नेहरू अधिक भएकाले अधिकांश सेवा’ग्राही फारम भर्नबाट बञ्चित थिए।
विभागका अनुसार सेवाग्राहीले बिहान ६ बजे’देखि राति १० बजेसम्म फारम भर्न सक्नेछन्। अनलाइन फारम भर्नका लागि याता’यात व्यवस्था विभागको वेब’साइटमा जाने।
पेज खुलेपछि दाइनेपट्टि अन’लाइन स’वारी चालक अनुमति पत्र प्रणली लेखिएको लिंकमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि पेजको सबभन्दा माथि अनलाइन ड्राइभिङ लाइ’सेन्स रजिस्ट्रेसनमा जाने।
नयाँ पेज देखिएपछि क्याटोगो’रीमा गई नयाँ लाइसेन्स, लाइसेन्स रिन्यू, वा प्रतिलि’पिमध्ये एक अप्सन छानेर तल प्रोसिड लेखि’एको बटनमा क्लिक गर्ने।
त्यसपछि व्य’क्तिगत विवरण भरेर आफू’लाई पायक पर्ने परीक्षा केन्द्र छानेर सबमिट गर्ने। त्यसपछि ‘एप्लिकेन्ट सेभ्ड् सक्से’सफुल्ली’ देखिन्छ। त्यहाँ ओ’केमा क्लिक गर्ने। र, अन्त्यमा प्रिन्टमा क्लिक गरेपछि तपाईंको फारम भरिन्छ। – सेतोपाटी
Prevबिहानै खाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस, तपाँईलाई यस्तो हुनपनि सक्छ
Nextआज सुनको मूल्य बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्…
लामो समयपछि पल शाह र स्वस्तिमा खड्काको जुर्यो जोडी
‘छोडेर गइस् भने तलाई यहि मार्दिन्छु, श्वेता र बिजेन्द्रको यस्तो भिडियो (हेर्नुस् भिडियो )
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र नेपालमा कोरोना बाट ८ जनाको मृ’त्यु, कहाँ कति? हेर्नुहोस्